Hira 89: Izay Mihaino sy Mankatò dia Hotahina Tokoa | Hira ho An’i Jehovah
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bassa (Cameroun) Bichlamar Bicol Boligara Boulou Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cinghalais Cinyanja Dangme Douala Espaniola Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Goun Grika Guarani Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Icibemba Iloko Iokrenianina Islandey Italianina Karen (S'gaw) Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kwangali Kwanyama Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Luvale Macua Makoshi Malagasy Malezianina Mambwe-Lungu Mapudungun Masedonianina Myama Ndau Ndebele Ngangela Nias Norvezianina Nzema Oromo Ossète Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persianina Pidgin (Cameroun) Poloney Ponape Portogey Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rosianina Samoanina Sena Serba Serba (Soratra Romanina) Shona Silozi Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tshiluba Twi Télougou Wolaita Yorobà Éwé
Izay Mihaino sy Mankatò dia Hotahina Tokoa
1. Jesosy Kristy nampianatra antsika,
Ka fantatsika fa mahasoa izany.
Kanefa raha te ho sambatra isika,
Dia hankatò sy hitandrina hatrany.
’Zay mihaino sy mankatò
Dia hotahina tokoa.
Ho sambatra sy handray valisoa
’Zay mihaino sy mankatò.
2. Manaova trano eo ambony vatolampy,
Izany mantsy no miaro ny aina.
Tsarovy fa ny mandre dia tsy ampy;
Ny mampihatra no tena ilaina.
3. Ho toy ny hazo eo amoron’ny ony
’Reo mankatò an’i Jehovah Ray,
Satria mamoa ka tsy halazo intsony;
Homeny fiainana mandrakizay.
(Jereo koa ny Deot. 28:2; Sal. 1:3; Ohab. 10:22; Mat. 7:24-27; Lioka 6:47-49.)
Izay Mihaino sy Mankatò dia Hotahina Tokoa (Hira 89)